ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူး ကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အပြုသဘောဆောင်၊ အရေးပါသည့် ? - Yangon Media Group
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အ ရေးပါသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းသိန်းက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ပြောသည်။ ”သူဟာ အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်၊ ဒီခရီးစဉ်လာရောက်ပြီး တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာနဲ့ ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်ဖို့ အဓိကလုပ်ဆောင်မှာပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူး ကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Schraner Burgener အနေဖြင့် ရခိုင်အရေးသာမက ကချင်အရေးကိစ္စရပ်များကိုပါ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုခရီးစဉ်မှာ ပထမဆုံးလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး နောင်ထပ်လာရောက်ရန်လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား လာ ရောက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် သူမ၏ ခရီးစဉ်များသည် အရေးပါသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရသည် ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကြုံတွေ့ နေရသည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အထူးကြိုးစားလုပ် ဆောင်နေပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မှုအ တိုင်းအတာအလိုက် ယခုကြုံတွေ့ နေရသည့် နိုင်ငံတကာဖိအားများ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယခု ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင် ဒေသသို့ Mrs. Christine Schraner Burgener သွားရောက်ရာတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၊ မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများသာမက ကျန်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစုံစမ်းခွင့်ရခဲ့သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ၏ သိမ်မွေ့နက်နဲရှုပ်ထွေးမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့ ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရက UNDP, UNHCR တို့နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော MoU ကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရေးကိုလည်း တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ဇွန် ၂ဝ ရက်က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် Mrs. Christine Schraner Burgener တို့တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက အသိုက်အဝန်းများအကြား ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည် ဆောက်ရေးအတွက် သည်းခံမှု ဖြင့် အချိန်ယူကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ပံ့ပိုး ကူညီမှုလည်းလိုအပ်ကြောင်း၊ အသိုက်အဝန်းများအကြား မသင့် မြတ်မှုများမှာ ရှေးယခင်ကပင်တည်ရှိနေခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ယိုယွင်းလာခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်များ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ARSA ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လွန်စွာဆိုးရွားသည့်အခြေအနေ သို့ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မှုမရှိခြင်းမှာ လုံခြုံရေးအခြေ အနေအရ စိုးရိမ်သဖြင့်မသွားရဲကြ ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တရားဥပ ဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်ပမှအမုန်းပွားစေသော သဘောထားအမြင်များက အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြားပိုမိုကွဲပြားမှုများ ဖြစ်စေလျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြဿနာအား ရှေ့ဆက်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
”K Rock က ပထမဆုံး လာမှာဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြည့်ချင်တယ်။ တွဲဆိုရမှာလည်း ရင်ခုန်ပါတယ်” ဖြူဖြ??